Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Volkswagen vaovao ho an'ny lamaody sy ny fanatanjahantena, fomba Shinoa
Tamin'ny Septambra 2021, nifarana tao an-tanànan'i Lianyungang, Faritanin'i Jiangsu, ny Fifaninanana Famokarana Fiara Famokarana Faobe any Shina (antsoina hoe CCPC), nokarakarain'ny AutoCulture. Anisan'ireny, ny FAW-Volkswagen Audi A3L, iray amin'ireo modely telo tsara indrindra an'ny fianakaviana alemana, dia nahazo ny toerana voalohany amin'ny lohahevitra momba ny fanamafisam-peo sy ny fampihenana ny feo miaraka amin'ny vokatra tsara indrindra. Ao amin'ny fifaninanana feno fampisehoana sy ny taranja fitsapana elk ihany koa izany. Samy nahazo ny fiadiana ny ho tompondaka ary nahazo ny anaram-boninahitra “Triple Crown” teo amin’ny fiantsonana matihanina.
Audi, amin'ny maha-iray amin'ireo tompona alemana telo, dia safidy naniry foana ho an'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny bika aman'endriny sy ny fifehezana hery matanjaka sy azo itokisana, dia nahasarika tanora maro. Na izany aza, araka ny fiheveran'ny olona maro, Audi dia nomena anarana hoe "rendrarendra", "lafo", ary "tsy azo tratrarina". Tena izany tokoa ve? Raha ny marina, maro ny Audi andian-dahatsoratra modely any Shina amin'izao fotoana izao, manohana ny vokatra tsara, fa ny vidiny dia azo hatonina. Ohatra, ny Audi A3L horesahina anio, amin'ny maha fototry ny fivarotana ny fianakaviana Audi, dia tsy hanampo na oviana na oviana ho afaka hividy izany amin'ny vidiny 180,000 yuan. Ho an'ny fiara mahagaga toy izany.
Miara-miaina ny lamaody sy ny fanatanjahantena, safidy voalohany ho an'ny tanora
Ao amin'ny tsenan'ny mpanjifa fiara izay ipetrahan'ny tanora amin'ny mahazatra, ny fananana bika aman'endriny dia midika ho fiandohan'ny fahombiazana. Ny fahatsapana ny atmosfera sy ny lamaody dia nanjary fampahalalana manan-danja ho an'ny safidin'ny fividianana fiara. Amin'io lafiny io, amin'ny maha-andian-dahatsoratra mahazatra an'ny FAW-Volkswagen Audi, FAW-Volkswagen Audi A3L dia azo lazaina fa mahazo tsara ny toe-tsain'ny mpanjifa.
Ity fiara ity dia mifototra amin'ny lohahevitry ny "famolavolana lamaody" hatramin'ny nanombohany, tamin'ny fampiasana ny fiteny famolavolana lamaody farany an'ny fianakaviana Audi RS. Raha mijery avy eo anoloana, ny mason-drivotra hexagonal mahazatra mahazatra an'ny fianakaviana RS, miaraka amin'ny haingo krom-tantely mainty, dia manasongadina ny hatsarana sy ny atmosfera; ny fidiran'ny rivotra manodidina ny lafiny roa amin'ny bumper eo anoloana ary ny jiro LED miendrika maranitra dia mifanakaiky. Ny fihenjanana hita maso dia navotsotra tamin'ny ambaratonga lehibe indrindra, ary tsy manary ny anaran'ny "orinasa maivana" an'i Audi; ny lafiny tsipika amin'ny vatana dia maranitra sy feno fanatanjahan-tena fihetseham-po, avy amin'ny aoriana taillights ny amin'ny alalan'ny-karazana maranitra waistline manitatra ny jiro, ka ny fiara iray manontolo Toa manolotra swooping maso hatsarana sy ny fahatsapana ny fanatsarana. Anisan'ireo maodely mitovy ambaratonga, ny FAW-Volkswagen Audi A3L dia azo lazaina fa maneho ny faratampony amin'ny endriny ary mety indrindra ho an'ny mpanjifa izay mikatsaka ny lamaody sy ny fanatanjahan-tena tanora.
Voadio kokoa sy mahazo aina kokoa, mahatonga ny Audi A3L ho akaiky kokoa
Araka ny fitenenana dia natao ho hitan'ny hafa ny styling ivelany, ary ny anatiny dia ny tontolo iainana izay hiaraka aminao mandritra ny fotoana maharitra. Indrindra amin'ny fiara fianakaviana compact, dia tsy maintsy afaka manome tontolo iainana mitondra fiara miahy sy mahazo aina amin'ny fiainana andavanandro alohan'ny hankasitrahan'ny mpanjifa. Ity ihany koa ny FAW-Volkswagen Audi A3L efa lany tamin'ny tsenan'ny fiara fianakaviana. iray amin'ireo antony.
Mba hifanaraka bebe kokoa amin'ny fipetrahan'ny fiaran'ny fianakaviana iray dia nohalavaina 3mm ny tobin'ny kodiarana FAW-Volkswagen Audi A50L, ka tsy olana amin'ny mpandeha andalana faharoa ny mampitongilana ny tongony. Miorina amin'ny fisehon'ny endri-tsoratra, fampiasana hendry ny lesoka, endrika avo sy ambany hanehoana ny hakanton'ny indostria maoderina, ary avy eo ampiarahina amin'ny efijery lehibe roa avo lenta, haingon-trano chrome ary ny fomba fivoahan'ny rivotra mitovy amin'ny Urus, dia voadio ny atiny. . Azo lazaina hoe manapotika.
Iza no nilaza fa ny sedan compact dia tsy afaka manenjika ny gallop sy ny fitiavana?
Ny ankamaroan'ny fiara fianakaviana compact dia mikatsaka fampiononana sy fahafaha-mitondra, fa matetika tsy miraharaha ny lafiny fampisehoana ary tsy afaka manome ny mpamily ny traikefa mitondra fiara. Tsy azo ekena mihitsy izany raha ny fahitan’ny taranaka tanora mpanjifa. Raha te-hanohy ny fahafinaretan'ny hafainganam-pandeha sy ny fientanam-po amin'ny fametrahana sedan compact ianao, angamba mety ny FAW-Volkswagen Audi A3L.
Na dia eo aza ny FAW-Volkswagen Audi A3L dia napetraka ho toy ny familiana fiara, ary ny motera EA211 1.4T + 7-speed dual-clutch gearbox dia tsy misy na inona na inona holazaina amin'ny resaka masontsivana, dia afaka manome torsi ambony indrindra amin'ny 250N·m. ary hery ambony indrindra 110KW. Izy io dia afaka mahafeno tanteraka ny fepetra takian'ny tanora mitondra fiara isan'andro. Ankoatr'izay, ny FAW-Volkswagen Audi A3L dia manana ivon'ny sinton'ny ambany ihany koa, maivana kokoa ny faobe tsy mitongilana ary ny fampiatoana chassis somary henjana, izay mitondra ny fahombiazany amin'ny fikarakarana chassis amin'ny haavo avo kokoa, ny familiana manondro marina kokoa, ary ny kodiarana aoriana rehefa mihodina ny fiara. maranitra. Ny traceability koa dia marina kokoa, miaraka amin'ny fahafinaretana mitondra fiara be dia be!
Sendra ny FAW-Volkswagen Audi A3L dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana fiantsonan'ny CCPC 2021 tamin'ity indray mitoraka ity. Miaraka amin'ny famotsorana hery avo lenta sy fanamafisam-peo mahery vaika, dia afaka manome fahafinaretana ny mpamily amin'ny hazakazaka izany na manomboka manafaingana na miondrika. Noho izany, raha te ho afaka hanenjika ny hafainganam-pandeha sy hankafy ny fahafinaretana mitondra fiara sady mahafa-po ny fivezivezena isan'andro, FAW-Volkswagen Audi A3L no safidy tonga lafatra.
Amin'ny ankapobeny, ny FAW-Volkswagen Audi A3L dia manana kalitao tsara izay tsy azon'ny fiara mitovy amin'izany amin'ny lafiny maro. Ny bika aman'endriny, ny fampiononana ary ny fampisehoana mahery vaika dia mitovy amin'izany, ary izany ihany koa ny fahaizany mitarika eo amin'ny sehatry ny sedan an-trano. Ny antony dia ity fiara ity ihany koa no hankasitrahan'ny olona bebe kokoa.
Ity fiara ity dia mifototra amin'ny lohahevitry ny "famolavolana lamaody" hatramin'ny nanombohany, tamin'ny fampiasana ny fiteny famolavolana lamaody farany an'ny fianakaviana Audi RS. Raha mijery avy eo anoloana, ny mason-drivotra hexagonal mahazatra mahazatra an'ny fianakaviana RS, miaraka amin'ny haingo krom-tantely mainty, dia manasongadina ny hatsarana sy ny atmosfera; ny fidiran'ny rivotra manodidina ny lafiny roa amin'ny bumper eo anoloana ary ny jiro LED miendrika maranitra dia mifanakaiky. Ny fihenjanana hita maso dia navotsotra tamin'ny ambaratonga lehibe indrindra, ary tsy manary ny anaran'ny "orinasa maivana" an'i Audi; ny lafiny tsipika amin'ny vatana dia maranitra sy feno fanatanjahan-tena fahatsapana, avy amin'ny aoriana taillights ny amin'ny alalan'ny karazana maranitra andilany manitatra ny jiro ka ny fiara iray manontolo Toa manolotra swooping maso hatsarana sy ny fahatsapana ny fanatsarana. Anisan'ireo maodely mitovy ambaratonga, ny FAW-Volkswagen Audi A3L dia azo lazaina fa maneho ny faratampony amin'ny endriny ary mety indrindra ho an'ny mpanjifa izay mikatsaka ny lamaody sy ny fanatanjahan-tena tanora.